Natiijadii Kulankii dhex maray kooxaha Kubadda Cagta Dekedaha iyo Badbaado
Kulan ka tirsan horyaalka 35 aad ee Kubadda Cagta dalkeeni soomaaliya ayaa shalay galab waxaa isaga hor yimid kooxaha Kubadda Cagta Dekedaha iyo Badbaado,iyadoo kulankan uu ahaa mid xiiso gaar ah u lahaa labada naadi.
Kooxda Dekedaha oo ka mid ah kooxaha uga awooda badan dalka ayaa guul ka gaartay kulankaas kadib markii 2-0 uga badisay Kooxda Babaado oo ka mid ah kooxaha meesha ugu hooseysa ka hoggaaminaya horyaalka.
Goolasha kooxda Dekedaha ku badisay waxaa u kala dhaliyay C/casiis Maxamed Cali iyo C/wahab Maxamed Mahdi.
Guushaas ayaa waxay ka dhigaysaa in Dekedaha yeelato 11 dhibcood,iyadoo kaalinta 3 aad ka soo gashay horyaalka.
Horyaalka ayaa waxaa hoggaaminaysa Kooxda Banaadir Telecom, oo leh 15 Dhibcood, waxaa ku soo xiga Elman oo leh 14 dhibco, Dekedaha 11 Dhibco, SITT 10 dhibco, Super Shell 8 dhibco, kooxda Feynuus ayaa waxay leedahay 8 dhibco halka Badbaado ka leedahay 4 Dhibcood.